जीवनी र अरिष्टार्को डे समोसको शोषणहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
गणितज्ञहरु र खगोलविद्हरु मध्ये एक जसले आफ्नो अन्वेषणमा आफ्नो छाप छोडेका थिए सामोसको अरिस्तार्खस। यो एक वैज्ञानिकको बारेमा हो जसले आफ्नो समयको लागि क्रान्तिकारी परिकल्पना विकसित गरे। र यो यो हो कि, प्राचीन समयमा यो तोकिएको कुराको विरुद्धमा जान खतरनाक थियो। यद्यपि यस मानिसले यो दावी गरे कि सूर्य र पृथ्वी होइन, ब्रह्माण्डको स्थिर केन्द्र हो। उनले यो पनि दाबी गरे कि पृथ्वी र अन्य ग्रहहरुसंग पनि सूर्यको परिक्रमा भयो। अवश्य पनि यसले मानिसहरुमा हलचल मचायो जुन विश्वास गर्छन् कि पृथ्वी को माध्यमबाट ब्रह्माण्डको केन्द्र थियो। भू-केन्द्रित सिद्धान्त.
यस लेखमा हामी तपाईलाई समोसको अरिस्तार्खसको गणित र खगोल विज्ञानको इतिहासमा भएको नक्कल र परिणामहरूको बारेमा बताउन जानेछौं।
1 जानकारी निजी
2 एरिस्टार्को डे सामोसको मुख्य योगदान
एरिस्टार्को डे सामोस वैज्ञानिक कामका लेखक थिए "सूर्य र चन्द्रमाको परिमाण र दूरीको।" यस पुस्तकमा उनले वर्णन गरे जुन सब भन्दा सही गणनाको एउटा हो जुन त्यहाँ हाम्रो ग्रह र सूर्यको बीचको सम्भावित दूरीको समय थियो। आफ्नो एक कथनमा उनले भने कि ताराहरू आफू भन्दा ठूला थिए। यद्यपि तिनीहरूलाई आकाशमा पोइन्ट्सको रूपमा देख्न सकिन्छ, ती हाम्रो भन्दा सूर्यहरू थिए। यो ब्रह्माण्डको आकार वैज्ञानिकहरूले दावी गरेको भन्दा धेरै ठूलो थियो।
उहाँ ई.पू. 310१० मा जन्मनुभएको थियो त्यसैले तपाईं त्यस समयमा अवस्थित आधारभूत ज्ञानको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बाबजुद पनि, सामोसको अरिस्तार्खस आफ्नो समयको लागि सिद्धान्तहरू विस्तृत रूपमा विस्तार गर्न सक्षम भए। उहाँ ईसापूर्व २230० ईसापूर्वमा मर्नुभयो। अलेक्जान्ड्रिया, ग्रीसमा सी। ऊ पहिलो मानिस हो जसले हाम्रो ग्रहबाट सूर्यको अध्ययन एकदम सही तरीकाले गर्न सक्थ्यो। उनले पृथ्वी र चन्द्रमाको बीचमा के थियो भनेर अध्ययन गरे र भने। उनले हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तको स्थापना गर्दै भन्दै सूर्य सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र थियो, पृथ्वीको होइन।
सत्रौं शताब्दीमा यस वैज्ञानिकको योगदानलाई धन्यवाद, निकोलस कोपर्निकस अधिक विस्तृतमा विस्तृत गर्न सक्षम थियो हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त। एक मानिस भएको कारण जो धेरै पहिले बस्‍यो, उसको जीवनको बारेमा धेरै जानकारी छैन। यो ज्ञात छ कि ऊ ग्रीसमा जन्म भएको थियो र एक खगोलविद् र गणितज्ञ थिए। उनको सम्पूर्ण जीवन अलेक्जान्ड्रियामा बित्यो। यसको प्रभाव इजिप्टबाट आएको थियो जसले युनानीहरूको गणित शताब्दीयौं अघि विकास गर्न थाल्यो। उनीसँग पहिले पनि खगोलविद्याको विकास गर्न बेबिलोनबाट प्रोत्साहन थियो।
अर्को तर्फ, पूर्व अलेक्ज्याण्डरको साथ पूर्वको उद्घाटनले विचारहरूको आदानप्रदान गर्न मद्दत गर्‍यो जुन त्यस समयको धारणामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। यो त्यो प्रसंग हो जहाँ समोसको अरिस्तार्खसले हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तको विकास गरिरहेका थिए।
एरिस्टार्को डे सामोसको मुख्य योगदान
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान मध्ये एक हो कि उनले यो पत्ता लगाए कि ती ग्रहहरू ती हुन् जुन पृथ्वी लगायत सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका थिए। यस खोजमा पुग्न उनले तर्क प्रयोग गरे। थप, उनले चन्द्रमा र पृथ्वीको साइज अनुमान गर्न सके र तिनीहरू कत्तिको टाढा छन् भनेर हेर्न सक्षम थिए।
उसले पत्ता लगाउन सक्षम भयो, यद्यपि ताराहरू आकाशबाट धेरै सानो देखिन्छन्, तिनीहरू अत्यन्त आकारको सूर्यहरू जस्ता थिए, तर धेरै टाढाका ठाउँहरूमा। यी सबै स्पष्टीकरणहरू निकोलस कोपर्निकस द्वारा प्रयोग गरिएको हेलियोसेन्ट्रिक थियरीको विरासतको रूपमा काम गर्थे।
पुरातन समयमा ब्रह्माण्डको बारेमा थुप्रै सिद्धान्तहरू थिए। कल्पना गर्नुहोस् यदि त्यहाँ दन्त्यकथा, कथाहरू र गलत विश्वासहरू थिए। यी सिद्धान्तहरूको धेरै भगवान कल्पना, कथाहरू, आदि को एक धेरै थियो। हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त हामीसँग त्यस समयमा भएका सबै कुराको क्रान्तिकारी गर्न आयो। यो निम्न सिद्धान्तहरूमा आधारित थियो:
सबै आकाशीय पिण्डहरू एकै बिन्दुमा घुमाउँदैनन्।
पृथ्वीको केन्द्र चन्द्रमाको क्षेत्रको केन्द्र हो। यसको मतलब चाँहि कक्षा हाम्रो ग्रह वरपर छ।
ब्रह्माण्डका सबै क्षेत्रहरू (ग्रहहरू भनिन्छ) सूर्यको वरिपरि घुम्दै छन् र सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा स्थिर तारा हो।
पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी अन्य ताराहरूको बीचको दूरीको तुलनामा केवल नगण्य अंश मात्र हो।
पृथ्वी गोला बाहेक अरू केही छैन जुन सूर्यको वरिपरि घुम्छ र एक भन्दा बढि आन्दोलन गर्दछ।
ताराहरू स्थिर छन् र सार्न सकिँदैन। पृथ्वीको परिक्रमणले के देखाउँछ भने तिनीहरू अघि बढिरहेका छन्।
सूर्यको चारैतिर पृथ्वीको कक्षाको चालले अन्य ग्रहहरू घट्दै गएको देखिन्छ।
हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तका सबै स्थापित विन्दुहरूबाट, १ data1532२ मा थप विकसित र विस्तृत कार्यहरू प्राप्त गर्न निश्चित डाटा स be्कलन गर्न सकिन्छ। यस वर्ष यसलाई भनिन्थ्यो "आकाशीय क्षेत्रहरूको क्रान्तिहरूमा।" यस कार्यमा सिद्धान्तका main मुख्य तर्कहरू कम्पाइल गरिएको थियो र विस्तृत रूपमा गणनाको साथ प्रत्येक तर्क प्रदर्शन गर्दछ।
अरिस्टार्को डे सामोससँग अन्य कामहरू छन् जुन "सूर्य र चन्द्रमाको आकार र दूरीमा" र अर्को "आकाशीय क्षेत्रको क्रान्तिहरू" भनेर चिनिन्छ। यद्यपि उनी वाक्यांशका साथ इतिहासमा तल झर्ने व्यक्ति होइनन्, उनीसँग एउटा पुरानो पुस्तकमा चिनिन्छ र निम्न कुरा भन्नुहुन्छ: "हुनु भनेको हो, छैन।"
यस व्यक्तिको महत्त्व यस तथ्यमा निहित छ कि उहाँ हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त बनाउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जुन आफ्नो समयको लागि एकदमै उन्नत थियो। उनले स्वीकार गरे कि पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि पूर्ण क्रान्ति ल्यायो र त्यो एक बर्ष लाग्यो। थप रूपमा, यसले हाम्रो ग्रह भेनस र मंगल ग्रहको बीचमा पत्ता लगाउन सफल भयो। उनले दावी गरे कि ताराहरू सूर्यबाट लगभग असीमित दूरीमा थिए र ती स्थिर थिए।
यी सबै आविष्कारबाट पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र थिएन, तर यो सूर्य हो भन्ने धारणाको अधिकार पाउन सम्भव छ। यसका साथै यसले यो पनि थाहा पायो कि पृथ्वी केवल सूर्यको वरिपरि घुम्दैन, तर आफैमा पनि। यसको अक्ष
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं अरिस्टार्को डे सामोसको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » सामोसको अरिस्तार्खस
ध्रुवीय बरफ टोपी